ထပ်တလဲလဲကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးကြွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အုံကြွမှုတွင် CRF-1 receptors ကကမကထပြုသော dopamine ထုတ်လွှတ်မှု၏ရေရှည်ဆုံးရှုံးမှု။ (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ကြွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum ပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် CRF-1 receptors ကကမကထပြုခဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ရေရှည်အရှုံး။ (2013)
ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2013 မေလ 16 ။ pii: S0166-4328 (13) 00283-0 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2013.05.012 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
Sotomayor-Zárate R ကို, Renard GM က, Araya ka, Carreño P ကို, Fuentealba ဂျေအေ, Andre ME, K သည် Gysling.
စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ထောင်စုနှစ်သိပ္ပံနျူကလိယနှင့် စှဲမွဲမှု, ဆဲလ်များနှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒဌာန, ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန, Pontificia တက္ကသိုလ်Católicaက de ချီလီ; Centro က de Neurobiología y က Plasticidad နှောက်, Departamento က de Fisiología, Facultad က de Ciencias, Universidad de Valparaíso။
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum (LS) စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှဆက်နွယ်နေတဲ့ဦးနှောက်နျူကလိယဖြစ်ပါသည် စှဲမွဲမှု. ဤတွင်ကျနော်တို့ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ချိအချက် (CRF) corticotrophin များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းပြသ။ 1μM stressin-1 ၏ပြောင်းပြန် Dialysis, အမျိုးအစား 1 CRF အဲဒီ receptor (CRF-R1) agonist, က CP-1 နှင့်အတူ stressin-154526 ၏ Co-perfusion ပိတ်ဆို့ခဲ့ကွောငျးဆား-ကုသကြွက်များတွင် LS dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်၏သိသိသာသာတိုးသွေးဆောင် တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် CRF-R1 ရန်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး (15mg / ကီလိုဂရမ်; နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ် 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့) CRF-R1 activation အားဖြင့်သွေးဆောင် LS dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးနှိမ်နင်း။ ဤသည်ဖိနှိပ်မှု 24hours လေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ် 21 ရက်ပေါင်းထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်ခံခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင် LS အတွက် depolarization-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဆား-ကုသကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ cocaine- အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ LS အတွက် CRF-R1 ၏ activation dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသိသာသာတိုး induces ဖော်ပြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် CRF-R1 ကမကထပြုခဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် LS အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ယာယီတိုး၏ရေရှည်ဖိနှိပ်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။